Safidy Sarotra Atrehan’ireo Borondey Mpitsoa-ponenana : Hijanoana Any Amin’ireo Toby Feno Olona Loatra Na Hiverina Amin’ny Tsy Azo Antoka · Global Voices teny Malagasy
Nandika (fr) i Marie Bilau
Voadika ny 02 Novambra 2017 13:11 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Ελληνικά, Français, Português, русский, polski, Italiano, English
Ny tobin'ny mpitsoa-ponenana Mahama miorina ao amin'ny faritr'i Kirke, atsinanan'i Roandà, mampiantrano Borondey mpitosa-ponenana maherin'ny 53.000. 29/08/2017. Sary: Alan Whelan / Trócaire.
Raha tsy misy fanamarihana mifanohitra, mankany aminà tranonkala amin'ny teny frantsay ny rohy rehetra ao amin'ity lahatsoratra ity..
Tamin'ny 7 Septambra lasa teo, nisy andianà fiara mitondra mpitsoa-ponenana 301 avy any amin'ny tobin'i Nduta any Tanzania nampodiana tany Borondi, narahin'ny vondronà Borondey hafa ny andro taty aoriana. Raha atambatra, olona 12.000 no voasoratra tao amin'ny lisitry ny nanaiky hiverina an-tsitrapo any amin'ny fireneny amin'ity taona ity. Raha tsy izy ireo no voalohany, dia mitombo hatrany ny isany ary ny governemanta ao Borondi , Tanzania, ary ny Biraon'ny Firenena Mikambana misahana ny Mpitsoa-ponenana (UNHCR) no miantsoroka ny fiverenan'izy ireo.
Na izany aza, ny krizy, vokatry ny korontana taorian'ny fifidianana tamin'ny 2015, izay nanosika ireo Borondey maro handositra, dia tsy mbola nifarana. Na may mafy ny hiverina any amin'ny taniny aza ireo mpitsoa-ponenana sasany, dia nanao fitokonana tany Tanzania mba hangataka ny fanafainganana ny dingana fampodiana an-tanindrazana, maro ny olona izay manahy momba ny fodian'izy ireo.
Tsy latsaky ny mpitsoa-ponenana 400.000 no voasain'ny HCR , ny 240.000 amin'ireo any Tanzania, ary manohy mandray tsy tapaka ireo vao tonga vaovao ilay toby. Nanambara ny fahatongavan'ny miptsoa-ponenana 180 vaovao any Nduta tamin'ny 15 Septambra lasa teo ny SOS Media Burundi, fikambaan'ny mpanao gazety ao an-toerana; ny telo tamin'ireo dia vao tafody tao Borondi, nefa nanapaka hevitra ny hiverina tao amin'ilay toby.
Niantso ireo mpitsoa-ponenana hody any aminy ny governemanta ary nanambara fa efa tsy atahorana intsony ankehitriny ny toe-draharaha ao amin'ny firenena. Mampirisika ny fampodiana ihany koa ny filohan'i Tanzania. Amafisin'ireo manampahefana ao Borondi fa tsy marina ny isa omen'ny ONU, azo lazaina koa hoe nasiam-panovàna, ary maherin'ny 150.000 ny olona tafody. Tonga hatramin'ny [amin'ny teny anglisy] fanamelohan'izy ireo ny HCR ho manelingelina ny fodian'ireo Borondey any amin'ny taniny.
#Burundi “Mampihomehy ilay tarehimarika 400.000, isan'ireo Borondey mpitsoa-ponenana nomen'ny Masoivohon'ny Firenena Mikambana misahana ny mpitsoa-ponenana”, Philippe Nzobonari
Na eto na any, sarotra foana ny fiainan'ny Borondey
Niala tany Borondi noho ny antony maro samy hafa ireo mpitsoa-ponenana. Ary mbola antony maro samy hafa koa no manosika azy ireo hiverina any amin'ny taniny, anisan'izany ny fampihavanana politika, ny fandraisana andraikitra [ny manam-pahefana], ary ny fisian'ny entana tena ilaina andavanandro azo jifaina. Na izany aza, nanamarika [amin'ny teny anglisy] ny Amnesty International fa maro no tratran'ny famoretana [amin'ny teny anglisy] mikendry ny handrisihana azy ireo hody any amin'ny taniny.
Sarotra ny fiainana any amin'ireo tobin‘ny mpitsoa-ponenana : voafetra ireo loharanon-karena sy ny habaka, ary mametraka olana ny tsy fandriampahalemana. Tena nihena be ny famatsiana tao amin'ny tobin'i Nduta, efatra tao anatin'ny enina volana. Nanao hetsi-panoherana ny tsy fanjariian-tsakafo ireo mpitsoa-ponenana, niteraka herisetra vitsivitsy; ny sasany tonga hatrany amin'ny fiahiahiana fa ity toe-draharaha ity dia natao mba hanosehana [amin'ny teny anglisy] azy ireo hody any aminy. Nanao antso [amin'ny teny anglisy] ho amin'ny fampiakarana ny famatsiana amin'ny hamehana ny HCR, tamin'ny fanambarana fa ny 6% n’ny filàna monja no voavonjy tamin'ny septambra.
Efa niverina i Marc Ntukamazina, izay nandositra an'i Borondi noho ny antony tsy fandriampahalemana ary nodorana ny tranony. Hoy izy tamin'ny SOS Médias Burundi:
LTsy mora ny fiainana any Tanzania. Antenaiko fa hahita filaminana kokoa noho ny taloha aho amin'izao fotoana izao.
Any Kivu atsimo, any amin'ny Repoblika Demokratikan'i Kongo, Borondey 39 sy miaramila iray no maty tamin'ny 15 septambra nandritra ny fifandonana tamin'ny mpitandro filaminana – sivily mpanao fihetsiketsehana manohitra ny fampodiana any Borondi araka ny filazan'ny vavolombelona sy ny Firenena Mikambana [amin'ny teny anglisy], fanafihana hoy ny manampahefana.
Any Borondi, mitohy ny olana ara-toekarena izay nandosiran'ny maro, ary vokatry ny tsy fandriampahalemana ara-politika ny ankabeazany. Araka ny loharano sasantsasany, miatrika olan'ny tsy fahampiana ara-tsakafo ny firenena, noho ny fihenan'ny fampiasambola, ny fiakaran'ny tahan'ny tsy fisian'ny asa, ny tsy fahampian'ny herinaratra sy ny solika miverimberina sy ny tsy fahampian'ny sakafo, ary vesatra sy “hetra” mahabe resaka. Ny mpanao gazety, Esdras Ndikumana, izay nandao ny firenena taorian'ny daroka nahery setra natao azy nandritra ny fitazonana azy tamin'ny 2015, nibitsika hoe:
Burundi: le Gvt et des pétroliers assurent que “pas de pbms de stock”.Mais dnas ce cas, comment expliquer cette pénurie d'essence en cours? https://t.co/UfFr26QDA8y
Borondi: manome toky ny gvt sy ireo mpitrandraka solika fa “tsy misy olana ny famatsiana”. Nefa raha izany, ahoana no hanazavana ity tsy fahampian'ny solika misy amin'izao fotoana ity? https://t.co/UfFr26QDA8y
Mitohy ny tsy fandriampahalemana politika. Tatitra maromaro no miampanga ny governemanta ho manao didy jadona sady manitsakitsaka matetika [amin'ny teny anglisy] ny zon'olombelona, ​​fiampangana làvin'ny governemanta. Tamin'ny Aogositra 2017, nanameloka ny herisetra natao tamin'ny mpanohitra ny fikambanana iraisam-pirenena momba ny zon'ny mpitsoa-ponenana, amin'ny fifotorana tamin'ny fijoroana vavolombelon'ireo mpitsoa-ponenana ao Ogandà. Tamin'ny Jolay, nitatitra tranganà fahafatesana manodidina ny 1 200 nanomboka tamin'ny 2015 ny federasiona iraisam-pirenena momba ny zon'olombelona, ary nampitandrina momba ny fihamafisan'ny jadona izay manohintohina ny fahalalahana maneho hevitra.
Mbola miatrika fanakatonana, fitsarana ary sotasota ireo fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana (ONG) sy ny haino aman-jery niaingàn'ireny fiampangana ireny. ny andron'ny 12 septambra, nalaina an-keriny ny mpifanandrina ara-politika, Leopold Habarugira, raha mbola miaina any an-tsesitany kosa ny hafa. Antoko maromaro no naato noho ny filazàna azy nanao tsy fanarahan-dalàna ara-bola. Ny Minisitry ny Atitany, Pascal Barandagiye, dia nitaky tamin'ny fitsarana ny fandravàna ny antoko mpanohitra MSD.
Nitaky ny fanokafana ny fanadihadiana lalina ataon'ny Fitsarana Iraisam-pirenena momba ny Heloka Bevava (CPI) ny Vaomiera mpanadihadin'ny Firenena Mikambana, fangatahana izay nataon'ny mpanohitra sy ny ONG ao Borondi koa, fa tsy ny Firaisambe Afrikana. Tamin'ny 2016 anefa, nanambara ny fanapahankeviny handao ny CPI i Borondi, fialàna izay hanan-kery ny 27 Oktobra ary hampanasarotra ny fanokafana fanadihadiana vaovao.
“Fahatsapàna tahotra” manaraka ireo mpitsoa-ponenana
Nilaza ny filohan'ny Vaomiera mpanadihady ao amin'ny Firenena Mikambana, Fatsah Ouguergouz, fa manaraka ireo mpitsoa-ponenana any an-tsesitany ny “fahatsapàna tahotra” ary tsy mbola azo antoka ho an'ny fiverenana an-tanindrazana ny fepetra amin'izao fotoana izao. Nanjary niafina bebe kokoa ny herisetra ara-politika, saingy mijanona ho misy hatrany, miaraka amin'ireo tranga voatatitra mombanà fanjavonana, fampijaliana ary fisamborana tsy misy porofo.
Lavin'ireo minisitra an-kitsirano ireo fanambarana ireo ary nanaiky hanao fandihadiana ny Antenimieram-pirenana, fa i Willy Nyamitwe kosa, mpanolotsain'ny filohan'i Borondi amin'ny resaka serasera, dia miampanga tsikolbakomban'ny tandrefana. Nisy fikarakaràna hetsi-panoherana manohitra ny Firenena Mikambana, na nilaza aza ny SOS Médias Burundi fa nisy noterena handray anjara ny sasany .
Borondi: fihetsiketsehanà vehivavy mpomba ny fitondrana mangataka amin'ny gvt mba hitondra ireo mpikambana ao amin'ny vaomiera mpanadihadin'ny ONU hiatrika fitsarana pic.twitter.com/2MgRUwokUi
Mihena ny fanantenana hisianà fifanakalozan-kevitra eo amin'ny mpanohitra “mahery fihetsika” mizarazara sy ny governemanta izay nanamafy ny fifehezany, ary izany dia hamaha ny olan'ny fisarantsarahana. Tapaka ny fifanakalozan-kevitra ao amin'ny faritra, ary nanameloka ny tsy fahampian'ny fandraisana andraikitr'ireo mpandray anjara i Benjamin Mkapa, mpanelanelana. Mandritra izany fotoana izany dia miatrika olana mifandray amin'ny fahasarotan‘ny fifandraisan‘i Bujumbura amin'ny ONU sy ny Firaisambe Eoropeana ary ny fahasamihafana iraisam-pirenena momba io resaka io i Michel Kafando, iraka manokan'ny ONU.
Tohizan'ny governemanta ny fametrahana ny fanavaozana lalàm-panorenana mampiady hevitra izay hanome fotoana fanampiny hitantanan'ny filoha Nkurunziz. Niantso fandraisana anjaran'ny vahoaka koa izy ho an'ny famatsiambola ny fifidianana 2020 mba hialàna amin'ny fiankinandoha amin'ireo mpamatsy vola, izay niala taloha kelin'ny fifidianana tamin'ny 2015 noho ny herisetra ara-politika. Toa vao mainka manamafy ny toeran-drangahy io ireo marika fanohanana avy amin'ny Imbonerakure – Fikambanan'ny tanora avy ao amin'ny antoko eo amin'ny fitondrana, nampangaina noho ny herisetra [angl] sy ny maha-ao amin'ny milisy fehezin'ny filoha azy ireo .
Ny ankamaroan'ireo nandositra dia nanohitra ny fanitarana ny fetra farany ho taom-pitondrana roa ho an'ny filoham-pirenena, ary mihevitra azy io ho fiatahana amin'ireo fandaminana taorian'ny adin'ny fizaràna fahefana, nilaina mba hihazonana ny fandriampahalemana, ary manondro dingana iray mankany amin'ny firenena iray tsy misy afa-tsy antoko tokana.
Mbola tsy voavaha ireo olana fototra momba ny tsy fandriampahalemana ara-politika sy ara-toekarena ireo, ary mamela ny mpitsoa-ponenana hiatrika safidy sarotra na tsara ho azy ireo ny miverina any Borondi na hijanona ao amin'ireo toby.